उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले खानै पर्ने फल - जान्नुहाेस् याे फलकाे फाइदाबारे - ज्ञानविज्ञान
असन्तुलित जीवनशैलीका कारण संसारभर उच्च रक्तचापका बिरामी फैलिदै गएको पाइन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै चुनौति पूर्ण अवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैले हरेक ब्यक्तिले सन्तुलित आहारको सेवन गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण एक उपाय नाशपातीको सेवन गर्नु पनि हो ।
नाशपाती तीन महिनासम्म लगातार खानाले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । नाशपातीमा प्रशस्त मात्रामा पानी र फाइरबरका साथै सोडियम, पोटाशियम हुन्छ । जसले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
नाशपातीको नियमित सेवनले कोलेष्ट्रेरोल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । यसको सेवनले शरीरमा भएको बिकार पदार्थ बाहिर निकाल्न मद्दत पनि गर्छ । नाशपातीको सेवनले शरीरमा शक्ति पैदा गर्छ । त्यसैले नाशपातीको नियमित रुपमा सेवन गर्नु लाभदायी हुन्छ ।
दिनको एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ धाउनुपर्दैन भन्ने पुरानो आहान नै छ । वास्तवमा स्याउ एकदमै स्वस्थकर खानेकुरा हो ।
स्याउमा एन्टीअक्सिडेन्ट, फाइबर र फ्लेभोनोइड प्रशस्त पाइनछन् । यसमा भएको फाइटोन्युट्रिएन्टले धेरैथरी फाइदा गर्छ ।
स्याउमा धेरै पानी र फाइबर हुन्छ । त्यसैले यसलाई पूर्ण आहार बनाउँछ । अझ यसमा भएका प्राकृतिक कम्पाउन्डले तौल घटाउन मद्दत गर्छ ।
स्याउमा सोलुबल फाइबर हुनाले मुटुरोगको सम्भावना घटाइदिन्छ र यसले कोलेस्ट्रोल स्तर पनि घटाउँछ । अझ, यसमा भएको पोलीफेनोलले रक्तचाप घटाउँछ ।
पेटको अग्न्याशय (प्यानक्रियाज) मा भएको बिटा सेलहरूको टिस्युमा क्षति पुग्नबाट बचाउनका लागि स्याउमा भएको पोलीफेनलले मद्दत गर्छ ।
स्याउमा भएका प्राकृतिक कम्पाउन्डले क्यान्सरसँग लड्न मद्दत गर्छ । केही अध्ययनहरूले स्याउ र क्यान्सर घटाउने बीचको सम्बन्धलाई देखाएका छन् ।
स्याउमा भएको एन्टीइन्फ्लेमेटोरी तथा एन्टीअक्सिडेन्ट कम्पाउन्डले दमबाट बचाउँछ ।
स्याउमा भएको फाइबरले राम्रो ब्याक्टेरिया जन्माउँछ र यसले शरीरलाई मोटोपना, टाइप टु मधुमेह तथा मुटुरोगबाट बचाउँछ ।
स्याउको रसले बुढ्यौली तथा मानसिक रोग हटाउँछ । यसले न्युरोट्रान्समिटर घटाउन रोक्छ । न्युरोट्रान्समिटरले हाम्रो स्मरणशक्तिलाई राम्रो बनाउँछ ।
स्याउले हाडलाई पनि बलियो बनाउँछ ।
यसकारण स्याउ धेरै खानुहुँदैन
स्याउ खानुका स्वास्थ्य फाइदाहरू अनगिन्ती छन्। स्वस्थ फाइबर, भिटामीन अनि कार्बोहाइड्रेटले भरिएको स्याउ दैनिक सेवन गर्न विश्वका सबै चिकित्सकहरू सल्लाह दिन्छन्। भोक लागेको बेलामा पनि स्याउ खाँदा केहि बेरको लागि भएपनि भोकलाई टाढा राख्दछ। तथापी, सबै खानेकुराजस्तै स्याउ पनि धेरै खाएमा फाइदा भन्दा बेफाइदा गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।Apple Store
एकै दिनमा चाहिने भन्दा बढी स्याउँ खाँदा स्वास्थ्यमा निम्न किसिमका असरहरू पर्दछन्ः
१. स्याउमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, नराम्रो खालको होइन राम्रै खालको कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। तर, दिनभरीमा चाहिनेभन्दा बढी कार्बोहाइड्रेट खाएमा, शरीरले इन्धनको रूपमा कार्बोहाइड्रेटलाई नै छान्दछ, जसको कारणले शरीरको बोसोलाई जलाउन पाउँदैन। त्यसले गर्दा शरीरमा बोसो थुप्रिँदै जान्छ र मोटोपना बढ्दै जान्छ।
२. स्याउमा क्यालोरी पनि प्रशस्तै पाइन्छ। सन्तुलित मात्रामा स्याउ खाँदा शरीरमा ऊर्जाको कमी हुँदैन, मतलब थकान, अनिन्द्रा अनि आलस्य हुँदैन। तर, धेरै स्याउ खाँदा शरीरमा चाहिने भन्दा क्यालोरी थुप्रिन जान्छ, जसले गर्दा मधुमेह हुने सम्भावना पनि एकदमै बढी हुन्छ।
३. उच्च रक्तचापबाट बच्नको लागि नियमित स्याउ खानैपर्छ भनेर यो भन्दा अगाडिको अङ्कमा जानकारी दिएका थियौँ। तर, विचार पुर्याउनुस् है, एकैदिनमा धेरै स्याउ खाँदा रक्तचाप बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ।
त्यसो भए, दिनमा कति स्याउ खानु उचित हुन्छ त?
सामान्यतयाः एउटा स्याउमा २५ ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ, जसमध्ये ५ ग्राम फाइबरको हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई दिनमा कम्तीमा पनि ४५ ग्राम कार्बोहाइड्रेटको जरुरत पर्दछ। त्यसैले दिनमा २ वटा स्याउ खानु सबैभन्दा उचित हुन्छ।
एउटा स्याउमा करीब १५० ग्राम क्यालोरी हुन्छ र दिनमा मानिसलाई करीब १००० क्यालोरीको जरुरत पर्दछ, तर अन्य खानेकुराहरूबाट पनि क्यालोरी पाइने हुनाले दिनमा ३/४ वटा स्याउ एकदमै उचित हुन्छ।
न्युटनको टाउकामा स्याउ नखसेको भए के हुन्थ्यो?
यी हुन् बोक्रासहित स्याउ खानुका फाइदा
स्याउ हरेक मौसममा सजिलै उपलब्ध हुने स्वादिष्ट फल हो । यो स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि लाभदायी हुन्छ । स्याउ नियमित खाएमा हाम्रो शरीरमा आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ । खासगरी, ब्रेकफास्टका रूपमा खानु उपयुक्त मानिन्छ । स्याउ बोक्रासहित खानु अनिवार्य छ । ब्रोका निकालेर खाँदा पोषक तत्व निस्केर जान्छ ।
स्याउमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर, क्याल्सियम र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । स्याउमा पाइने यी पोषक तत्वले मानिसलाई निरोगी बन्न सघाउँछ । साथै,रोगप्रतिरोधी क्षमतासमेत बढाउँछ ।
स्याउ सेवनले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउनुका साथै सुगर नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ । साथै, रक्तसञ्चारलाई यथावत् राख्न पनि सघाउ पु(याउँछ ।
स्याउमा पाइने फाइबरले कब्जियत कम गर्छ । पायल्सका बिरामीले नियमित स्याउ खाएमा समस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।
स्याउले शरीरमा रहेको पिएचको मात्रालाई नियन्त्रण गरी पाचनप्रणाली दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्छ ।
स्याउको सेवनले मस्तिष्कमा रहेका कोषिकाको रक्षा गर्छ । साथै, अल्जाइमरको खतरालाई पनि कम गर्छ ।
नियमित स्याउ खाँदा मोटोपन हटाउन सहयोगी हुन्छ । साथै, मोटोपनबाट हुने हृदयाघात, मधुमेह र मुटुरोगजस्ता समस्या हुने सम्भावना हुँदैन ।
मिर्गौलामा हुने पत्थरीबाट बच्न स्याउको सेवन लाभदायी हुन्छ । साथै, बिरामीले खाएमा पत्थरीका कारण हुने दुखाइबाट आराम मिल्छ ।
ब्रोकासहितको फाइबरयुक्त स्याउ खाँदा पित्तथैलीमा जमेर बसेको कोलस्ट्रोललाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । यसरी पित्तथैलीमा हुने पत्थरीबाट जोगिन मद्दत पुग्छ ।
हरेक बिहान एउटा स्याउ खाने हो भने स्तन क्यान्सरको सम्भावनालाई २३ प्रतिशत रोक्न सकिन्छ । साथै, यसले कलेजो र आन्द्राको क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ ।
Don't Miss it घाँटी दुखेकाे छ भने यस्ता खानेकुरा खानुहाेस्
Up Next पेट दुख्ने, अपच हुने , ग्यास्ट्रिक तथा कब्जियतबाट मुक्ति पाउन हीङकाे प्रयाेग गर्नुहाेस्